ကျန်းမာသော လေစီးဆင်းမှု - Panasonic
ကျန်းမာရေးနှင့် ပိုမိုညီညွတ်သော အေးမြမှုကို ခံစားရန် လေအေးကို အပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်လွှတ်တင်လိုက်ပါ
SKYWING မှာဆိုရင် တစ်သမတ်တည်းအေးမြမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့အတွက် လေစီးဆင်းမှုကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်စေမယ့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအသစ် ထိပ်ပြား ဒီဇိုင်း ပါဝင်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ပိတ်မိနေသည့် အပူကို ဖယ်ရှားရန် လေကို မျက်နှာကျက်နှင့် နံရံများဆီသို့ စီးဆင်းအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်သည့် Multidirectional Arm (ဘက်ပေါင်းစုံသို့ ဦးတည်နိုင်သော ဒလက်) ကို တပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် အခန်းတစ်ခန်းလုံးတွင် ဖြန့်ကျက် အေးမြနေစေသည့် ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပါသည်။
ပိုမိုကြီးမား များပြားသည့် ဒလက်ရွက်များပါဝင်သောကြောင့် လေနုအေးကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခန်းထဲတွင် မည်သည့်နေရာမှာပင် သင် ရှိနေပါစေ အေးမြသည့်ခံစားချက်ကို တစ်ညီတည်းခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အအေးမလွန်ကဲအောင် ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေ၏ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးသည်။
စဖွင့်ချိန်တွင် SKYWINGS သည် အောက်သို့ စောင်းလိုက်ပြီး အပူဒဏ်မှ ချက်ချင်း သက်သာစေရန် အေးမြသည့်လေကို သင့်ထံ တိုက်ရိုက် ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။ စွမ်းအားမြင့်သော အင်ဗာတာ ကွန်ပရက်ဆာဖြစ်သည့် P-TECh ဖြင့် SKY SERIES သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်သို့ ပို၍ မြန်ဆန်စွာဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
လေစီးဆင်းမှုကို ပို၍ မြန်မြန်ဖြင့် ဝေးဝေးရောက်အောင် ဖိသိပ်ပေးသည်/တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းလုပ်ဆောင်သည်
AEROWINGS ကို သီးခြားမော်တာ ၂ လုံးနှင့် နှစ်ခုတွဲ သီးခြားဒလက်များဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သည့်နှုန်းဖြင့် လေကို ထုတ်ပေးပြီး တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားသည့်အဆင့်ဖြင့် ဆက်လက် ဖြန့်ဝေပေးသည်။
၁. သီးခြားမော်တာ နှစ်ခု
ဒလက်အသေးနှင့် ပိုမိုကြီးမားသည့် ပြင်ပ ဒလက်တို့ကို သီးခြား ထိန်းချုပ်သည်
၂. ပိုမိုကြီးမားသည့် ပြင်ပဒလက်
လေကို ဝေးဝေးရောက်စေရန် ကူညီပေးသည်
၃. ဒလက် အသေး
အေးမြသော လေကို ဖိသိပ်ပြီး တစ်နေရာတည်းတွင် စုနေစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည်
Shower airflow သည် သက်သောင့်သက်သာစွာ အေးမြနေစေရန် အပေါ်မှနေ၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် လေထိစေခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ်အေးအောင် လုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ သင့်ကို သက်သောင့်သက်သာဖြင့် တစ်နေ့လုံး အေးနေစေပါသည်။
စဖွင့်ချိန်တွင် AEROWINGS သည် အောက်သို့ စောင်းလိုက်ပြီး အပူဒဏ်မှ ချက်ချင်း သက်သာစေရန် အေးမြသည့်လေကို သင့်ထံ တိုက်ရိုက် ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။ စွမ်းအားမြင့်သော အင်ဗာတာ ကွန်ပရက်ဆာဖြစ်သည့် P-TECh ဖြင့် AERO SERIES သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်သို့ ပို၍ မြန်ဆန်စွာဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။